Ukwesaba Okuvela Olwandle Kuhlasela I-Shudder 'The Beach House'
Ikhaya Izindaba Zokuzijabulisa Ezesabekayo Ukwesaba Okuvela Olwandle Kuhlasela I-Shudder 'The Beach House'
by UTimothy Rawles July 6, 2020
by UTimothy Rawles July 6, 2020 1,322 ukubukwa
Ukuqhaqhazela ubelokhu enikeza ababhalisile banokuqukethwe okuningi okuhle phakathi nobhadane futhi kuleli sonto akunjalo. I-horror streamer isethelwe ukukhishwa Indlu Yasebhishi ngoJulayi 9.
Kule creeper yezemvelo, sithola u-Emily noRandall bethatha uhambo oluya endaweni yomndeni wakhe yolwandle:
“Uhambo lwabo lokuya ngaphandle kwesizini luphazanyiswe nguMitch noJane Turner, umbhangqwana osukhulile ojwayelene nobaba kaRandall owayesehlukene. Ukwakheka kwamabhondi okungalindelekile lapho imibhangqwana idedela futhi ikujabulele ukuhlukaniswa, kepha konke kuthatha ithuba elibi njengoba izehlakalo zemvelo eziya ziba zimbi kakhulu ziqala ukuqeda ubusuku bazo obunokuthula. Njengoba imiphumela yokutheleleka ibonakala, u-Emily ulwela ukuqonda umqondo wesifo esithathelwanayo kungakephuzi kakhulu. ”
I-trailer, elandela ngezansi, inokuzwakala kwakho kokubili The Thing futhi Invasion of the Body Snatchers.
Umqondisi uJeffrey A. Brown unemvelaphi yokuhlola indawo futhi wasebenzisa lelo khono ukusetha imizwa yakhe Indlu Yasebhishi. Ngaphezu kwalokho, wayefuna ukwenza ifilimu eyayiqhakambisa ukusetshenziswa kweCronenburg kokuthusa umzimba, nge-dash kaJohn Carpenter, “kanye nokuziqhenya kwezindaba ze-HP Lovecraft.”
UBrown esitatimendeni mayelana nale filimu:
“IBeach House yimizamo yokuba nengxoxo eqondile nethembekile nezethameli. Bengifuna ukuthatha lokho enginomuzwa wokuthi bekulahlekile kumabhayisikobho asabekayo ngikujovele kuskripthi nakuhlelo lokukhiqiza. Ukukhathazeka kwami ​​ngokuqala kwe-apocalypse yezemvelo kwanikeza imoto ukwethuka, kuyilapho intshisekelo kwisayensi yokuziphendukela kwemvelo yaba yingqophamlando yendaba. ”
Indlu Yasebhishi ifika ngo-Shudder Julayi 9.